गठियाको लागि7व्यायाम | आन्दोलन अभ्यास, तान्ने, तानेर र प्रशिक्षण।
गठियाको लागि7व्यायाम
28 / 01 / 2017 /0 टिप्पणीहरू/i व्यायाम र व्यायाम/av भोंड्ट
के तपाई रुमेटिज्मबाट प्रभावित हुनुहुन्छ? यहाँ exercises अभ्यासहरू छन् जसले कार्य सुधार्न र संयुक्त दुखालाई कम गर्न मद्दत गर्दछ। व्यायाम तपाइँको गठिया डिसअर्डरको उतार चढावमा अनुकूल बनाउनु पर्छ। इष्टतम पुन: प्राप्तिको लागि व्यायामको संयोजनमा क्लिनिकहरूको उपचार आवश्यक पर्दछ। यी exercises अभ्यासहरूको गतिशीलता र लचिलोपन बढाउने कुरामा विशेष फोकस छ। र हो, हामी पूर्ण रूपमा सहमत छौं कि त्यहाँ केही खराब दिनहरू छन् जुन तपाईं ट्रेन गर्न सक्नुहुन्न।
रूमेटिज्म एक छाता शब्द हो जसमा जोर्नीहरू र संयोजी ऊतकमा दीर्घकालिन पीडा उत्पन्न हुने अवस्थाहरू समावेश गर्दछ। गठियाको 200 भन्दा बढी किसिमहरू छन्। उल्लेख गरिएझैं जोड्ने, संयोजी ऊतक र मांसपेशि प्राय: रुवाइटिसबाट प्रभावित हुन्छन्, तर यो जान्न महत्त्वपूर्ण छ कि वात रोगको निदानले छाला, फोक्सो, म्यूकस झिल्ली र अन्य अंगहरूलाई पनि असर गर्न सक्छ - यो कस्तो प्रकारको वायमेटिक निदान हो त्यसमा निर्भर गर्दछ। हाम्रो फेसबुक पेजमा हामीलाई सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस् यदि तपाईंसँग इनपुट वा टिप्पणीहरू छन् भने।
सुझाव: अनुकूलन अभ्यासको साथसाथै, हामी नियमित प्रयोगको पनि सिफारिस गर्दछौं कडा मांसपेशीहरु विरुद्ध ट्रिगर पोइन्ट बलहरु (उदाहरण यहाँ हेर्नुहोस् - लिंक नयाँ विन्डोमा खुल्दछ)।
यो पनि पढ्नुहोस्: तपाईलाई रुमेटिजमको बारेमा थाहा पाउनु पर्छ
यी सुझावहरूको साथ संयोजनमा हामी तपाईंलाई सिफारिश गर्दछौं कि तपाईं आफ्नो दैनिक आन्दोलन अनुकूल बनाउनुहोस्, उदाहरणका लागि कुनै न कुनै इलाकामा कस्टमाइज वाकको रूपमा वा तातो पानीको पोखरीमा पौडी खेल्नुहोस्। यदि तपाईंसँग पहिल्यै प्रमाणित निदान छ भने, हामी सिफारिस गर्दछौं कि तपाईले आफ्नो क्लिनिसियन (डाक्टर, काइरोपेक्टर, फिजियोथेरापिस्ट वा समान) तपाईले जाँच गर्नु पर्छ कि यी अभ्यासहरू तपाईका लागि उपयुक्त छ कि छैन। रुमेटिज्म र दीर्घकालीन पीडा भएकाहरूको लागि नि: शुल्क फेसबुक समूहमा पनि सामेल हुनुहोस्: संधिवात र दीर्घकालीन पीडा - नर्वे: अनुसन्धान र समाचार
भिडियो (यस भिडियोमा तपाईं स्पष्टीकरणको साथ सबै अभ्यासहरू हेर्न सक्नुहुनेछ):
तपाईंले प्रेस गर्दा भिडियो सुरु हुँदैन? तपाईंको ब्राउजर अपडेट गर्ने प्रयास गर्नुहोस् वा हाम्रो YouTube च्यानलमा सिधा यो हेर्नुहोस्। च्यानलमा सदस्यता लिन स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस्।
सुपिन स्थितिमा सजिलो साइड परिचालन
व्यायाम जुन पछाडि सार्छ र नजिकका मांसपेशीहरू तन्काउँछ। सावधानीका साथ र शान्त, नियन्त्रित आन्दोलनको साथ प्रदर्शन गर्नुपर्दछ।
सुरू स्थिति: तपाईंको पछाडि झुन्ड्नुहोस् - प्राथमिकतामा हेडरेस्टको लागि तकिया सहित प्रशिक्षण म्याटमा। तपाईका हातहरू सिधा बाहिरतिर राख्नुहोस् र त्यसपछि दुबै खुट्टा तपाईंतर्फ तान्नुहोस्। व्यायाम गर्नुहुँदा तपाईंको माथिल्लो शरीरलाई आराम गर्ने प्रयास गर्नुहोस्।
कार्यान्वयन: तपाईको घुँडालाई बिस्तारै बिस्तारै तल झर्नुहोस् जब तपाईको पेल्विसलाई स्वाभाविक रूपमा राख्नुहुन्छ - निश्चित गर्नुहोस् कि दुबै काँधहरू जमीनमा सम्पर्कमा छन्। कोमल चालका साथ व्यायाम गर्नुहोस् र पछाडि करीव -5-१० सेकेन्डको लागि होल्ड गर्नुहोस् अर्को पट्टि बिस्तारै सार्नु अघि।
The. एडीको विरुद्ध बटन (पछाडि व्यायाम)
यो व्यायामले मेरुदण्डलाई फैलाउँछ र परिचालन गर्दछ।
सुरू स्थिति: प्रशिक्षण म्याटमा सबै चौकामा उभिनुहोस्। तपाइँको घाँटी र पछाडि तटस्थ, थोरै विस्तारित स्थितिमा राख्ने प्रयास गर्नुहोस्।
सुत्छन्: त्यसपछि तपाईंको हिलमा तपाईंको बट तल गर्नुहोस् - कोमल गतिमा। मेरुदण्डमा तटस्थ वक्र कायम राख्न सम्झनुहोस्। करीव seconds० सेकेन्डको लागि स्ट्रेच समात्नुहोस्। केवल लुगा मात्र जहाँसम्म तपाईं सहज हुनुहुन्छ।
व्यायाम -4--5 पटक दोहोर्याउनुहोस्। व्यायाम दैनिक 3-4- times पटक गर्न सकिन्छ।
Ab. पेटको समर्थन
एक सक्रियता र परिचालन अभ्यास जुन पछाडि झुकाव आन्दोलनमा जान्छ - जसलाई विस्तार पनि भनिन्छ।
यस व्यायामले तपाईको पछाडि कोमलतापूर्वक परिचालन गर्दछ। तपाईंको पेटमा राख्नुहोस् र तपाईंको कुहिनो फर्शको अनुहारको साथ समर्थन गर्नुहोस्। आफ्नो घाँटीलाई तटस्थ स्थितिमा राख्नुहोस् (झुकाइएको छैन) र आफ्ना हातहरू मार्फत तल दबाब लागू गरेर बिस्तारै पछाडि तान्नुहोस्। तपाईंले पछाडि तान्न थाल्दा तपाईंले पेटको मांसपेशिमा हल्का तनाव महसुस गर्नुपर्छ - चोट पुग्न यति टाढा नजानुहोस्। -5-१० सेकेन्डका लागि स्थिति होल्ड गर्नुहोस्। -10-१० भन्दा बढि दोहोर्याउनुहोस्।
Leg. खुट्टा देखि छाती (तल्लो फिर्ता र सीटको लागि व्यायाम)
यो व्यायाम तल्लो पछाडि को आन्दोलन वृद्धि र सीट को मांसपेशी र तल्लो पछाडि तान्न को लागी लक्षित छ। आफ्नो घाँटी मुनि समर्थन संग एक प्रशिक्षण माटमा प्राथमिकता, आफ्नो फिर्ता तल संग भुइँमा सपाट झूट। तपाईंको खुट्टालाई तपाईंको विरुद्धमा तान्नुहोस् जबसम्म तपाईं झुकाइएको अवस्थामा हुँदैन।
त्यसोभए एक खुट्टा तपाईंको विरुद्धमा बnd्ग गर्नुहोस् जबसम्म तपाईं यो सीटमा हल्का तन्काउनु हुन्न र पछाडि तल्लो पछाडि। २०--20० सेकेन्डको लागि स्ट्रेच होल्ड गर्नुहोस् र प्रत्येक साइडमा times पटक दोहोर्याउनुहोस्।
तपाईं वैकल्पिक रूपमा दुबै खुट्टा छातीमा बnd्ग गर्न सक्नुहुन्छ - तर हामी तपाईंलाई यसलाई कम पीडा भएको बेला मात्र प्रयोग गर्ने सल्लाह दिन्छौं, किनकि यसले थोरै पछाडि डिस्कहरूमा अलि बढी दबाब दिन्छ।
Back. पछाडि मोरा बाहिरी हातहरु को साथ थेरापी बल
यो व्यायामले तपाईंलाई काँधको ब्लेड र घाँटी बीच तनाव र कठोरता कम गर्न मद्दत गर्दछ। भविष्यमा पनि मांसपेशी तनाव घटाउन यो एक महान व्यायाम फारम हो।
सुरू स्थिति: अगाडि घुम्नुहोस् ताकि तपाईं बलमा झुन्डिरहनुहोस् - तपाईले महसुस गर्नु पर्छ कि यो हल्का रूपमा छाती र घाँटी सम्म फैलिएको छ।
अन्तिम स्थिति: तपाईको हातलाई हतियारको साथ उठाउनुहोस् र तपाईका हातहरू छेउमा फैलाउनु भयो। १० सेकेन्डको लागि स्थिति पुन: बसाल्नु अघि समात्नुहोस्। -10-१० पटक दोहोर्याउनुहोस्।
Cat. बिरालो ऊँटको व्यायाम
बिरालो ऊँटको व्यायाम एक राम्रो र राम्रो परिचालन व्यायाम हो जसले सम्पूर्ण मेरुदण्डलाई थप आन्दोलन दिन्छ। यसले तानिन्छ र पछाडि, छाती र घाँटीमा बढी लचिलोपन प्रदान गर्दछ। यो घाँटी र पछाडि कडापन ढिला गर्न आवश्यक छ जो को लागी एक राम्रो व्यायाम हो। सबै चौकामा उभिन सुरु गर्नुहोस्, त्यसपछि तपाईंको फिर्ता बिस्तारै बिस्तारै बिस्तारै तल झर्नुहोस्, तर दृढ रूपमा आफ्नो पछाडि छततिर धकेल्नुहोस्। Sets--8 सेटमा -10-१० प्रतिनिधिहरूको लागि व्यायाम दोहोर्याउनुहोस्।
पछाडि तान्ने (काठको मेरुदण्ड, piriformis र सीट को खींच)
एक कसरत मैटमा बस्नुहोस् वा तल्लो ब्याकमा राम्रो आसनको साथ समान (यो झुम्क्नु हुँदैन)। त्यसपछि एउटा खुट्टा अर्कोपट्टि राख्नुहोस् र शरीरलाई विपरित छेउमा मोड्नुहोस् - तपाईले महसुस गर्नु पर्छ कि यो सीटको छेउमा राम्रोसँग फैलिएको छ र हिपको बाहिर बाहिर। यस मांसपेशिमा बढेको लचकता र आन्दोलनले तल्लो पछाडि दबाब कम गर्न सक्छ र यसरी तल्लो पछाडि कडापन कम गर्न मद्दत गर्दछ। Seconds० सेकेन्डको लागि व्यायाम समात्नुहोस् र दुबै पक्षमा sets सेटमा दोहोर्याउनुहोस्।
यहाँ exercises अभ्यासहरू छन् जसले कार्य सुधार्न र संयुक्त दुखालाई कम गर्न मद्दत गर्दछ। प्रशिक्षण तपाईंको वायमेटिक डिसअर्डरको उतार-चढावमा समायोजित हुनुपर्छ।
हामी वास्तवमै आशा गर्दछौं कि यो लेखले तपाईंलाई गठिया र दीर्घकालीन पीडा बिरूद्ध लड्न मद्दत गर्दछ।
रुमेटिक डिसअर्डरहरू र दीर्घकालीन पीडा निदान प्रभावित व्यक्तिका लागि अत्यन्त विनाशकारी हुन सक्छ। निदानले कम ऊर्जा, दैनिक दुखाइ र दैनिक चुनौतिहरू निम्त्याउन सक्छ जुन कारी र ओला नर्डम्यानको भन्दा धेरै माथि छ। हामी कृपया तपाईंलाई फाइब्रोमायाल्जियाको उपचारमा बढि ध्यान केन्द्रित गर्न र थप अनुसन्धानका लागि यसलाई मनपराउन र साझेदारी गर्न आग्रह गर्दछौं। मन पराउने र साझेदारी गर्ने सबैलाई धेरै धन्यवाद - शायद हामी एक साथ एक दिन उपचार फेला पार्न सँगै हुन सक्छौ?
अर्को पृष्ठ: - अनुसन्धान: यो उत्तम Fibromyalgia आहार हो
यो निदानको लागि स्व-मद्दतको सिफारिश गरियो
सङ्कुचन शोर (उदाहरण को लागी, कम्प्रेसन मोजे जसले खुट्टाका मांसपेशिहरुमा रक्त संचार बढाउन योगदान पुर्‍याउँछ)
ट्रिगर बिन्दु बल्स (दैनिक आधारमा मांसपेशिहरू काम गर्न स्व-मद्दत गर्नुहोस्)
कृपया हामीलाई अनुगमन गरेर र सोशल मीडियामा हाम्रो लेख साझा गरेर हाम्रो कार्यलाई समर्थन गर्नुहोस्:
- कृपया Vondt.net लाई पछ्याउनुहोस् YUTUTE
- कृपया Vondt.net लाई पछ्याउनुहोस् FACEBOOK
तस्वीर: विकिमेडिया कमन्स २.०, क्रिएटिभ कमन्स, फ्रीस्टॉकफोटो र सबमिट पाठक योगदानहरू।
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/7-øvelser-for-revmatikere.jpg?media=1648573622 368 700 भोंड्ट https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 भोंड्ट2017-01-28 20:21:182021-04-20 18:50:11गठियाको लागि7व्यायाम
जम्पर्स घुँडा (जम्पिंग घुँडी) को बिरूद्ध व्यायाम Atell व्यायामहरू प्यालोफोमोरल पेन सिन्ड्रोम (पीएफएस) को बिरूद्ध